विकिपीडिया:तटस्थ दृष्टिकोण - विकिपीडिया
(विकिपीडिया:तटस्थ दृष्टीकोण बाट पठाईएको)
यो पृष्ठले नेपाली विकिपीडियाको आधिकारिक नीति जनाउँछ । धेरैजनाले यसको समर्थन गर्दछन् । उनीहरूको विचारमा यो एक मापदण्ड हो जसलाई सबै प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्दछ । यस पृष्ठमा परिवर्तन गर्दा कृपया ध्यान पुर्याउनुहोस् कि सबैजना तपाईंले गरेको परिवर्तनसँग सहमत छन् । यदि तपाईँ पक्का हुनुहुन्न वा केही परिवर्तन प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तालाप पृष्ठको प्रयोग गर्नुहोस् ।
पृष्ठ छोटकरीमा: लेखले कुनै समूह वा कसैको पक्षपोषण गर्नुहुदैँन । यसमा तपाईं के वा कसरी भन्नुहुदैँछ, ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
यस तराजुले सम्पुर्ण भाषाका विकिपीडियाका लेखहरु निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने बताउँछ ।
विकिपीडियामा भएका सम्पुर्ण लेखहरुले तटस्थ वा निष्पक्ष दृष्टिकोण राख्ने हुनुपर्छ जसको अर्थ कसैलाई पनि फरक नसम्झी, नछुट्याई, प्रमाणित र भरपर्दो स्रोतबाट जानकारीहरु लेखिनुपर्छ । विकिपीडियामा आफ्नो विचार, विश्लेषण र दृष्टिकोण कहिले पनि नलेख्नुहोस् ।
विकिपीडिया र अन्य भातृ-विकि-परियोजनाहरुमा यो कुरा लागू हुन्छ । यो अति आवश्यक र विकिपीडियाका सम्पादकहरुले मान्नैपर्ने नियम हो ।
२ लेख तटस्थ बनाउन
तटस्थ भन्नाले विकिपीडियामा लेखहरू भरपर्दो स्रोत केलाई लेखिएको र ती जानकारीहरुले कुनै पनि व्यक्ति वा विचारको पक्ष नलिएको बुझिनुपर्छ । कुनै विषयमा मतभेद वा विवाद छ भने, त्यसैलाई लेखमा प्रकाश पारिनुपर्छ तर लेख त्यसमै आधरित भई यही सही भन्दै लेखिनु विकिपीडिको यस नियम विपरित हो । "तटस्थ दृष्टिकोण" भन्नाले कुनै विवादित विचारलाई समेट्नु नै हुन्न भनेको होइन बरु विषयलाई मध्यनजर गर्दै, भरपर्दो स्रोत जोड्दै सबै विषयलाई बराबर महत्व दिई लेखिनुपर्छ भनेको हो ।
निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्:
आफ्नो विचारलाई यथार्थ नबताउनुहोस्: लेखहरुमा प्राय विचारहरुको व्याख्या गरिन्छ तर त्यसो गर्दा त्यसलाई विकिपीडियाको आवाज नबनाउनुहोस् । कुनै पनि वाक्य लेखिँदा ती प्रमाणित हुनुपर्छ । जस्तै: लेखमा हत्या गर्नु महापाप हो । लेखिनुको सट्टा प्रोफेसर एक्सद्वारा हत्या गर्नु महापाप भनिएको छ । लेख्दा उपयुक्त बन्न आउँछ ।
विभिन्न भरपर्दो स्रोतमा नै फरक विचार छ भने सबैलाई स्रोत खुलाई लेख्नुहोस् ।
यदि कुनै कुरा यथार्थ हो भने त्यसलाई विकिपीडियामा स्रोत नदिइकन लेख्नुहोस् । जस्तै: घाम पूर्वबाट उदाउँछ ।
मन नपरेका विषयमा यदि कुनै लेख छ भने लेखको विषयलाई फरक रुपले अरु नै अर्थ दिने सम्पादन नगर्नुहोस् ।
लेखको विषयमा पक्ष र विपक्ष छन् भने दुवै विषयलाई सन्तुलन कायम राखी लेख्नुहोस् । यस विषयमा लेखिँदा कुनै पक्षका राम्रा पक्ष मात्र आउने गरी वा कुनै पक्षका नराम्रा पक्ष मात्र आउने गरि कदापि नलेख्नुहोस् ।
लेख तटस्थ बनाउन
विकिपीडियाको सामान्य नियम अनुसार भरपर्दो स्रोतबाट प्रमाणित गरिएका जानकारी नहटाउनुहोस् । यसो गर्दा विवादित विषयको लेखले तुलान्त्मक रुपमा तटस्थ दृष्टिकोण नदेखाएको हुन सक्छ, यसका लागि सम्पादकहरूले अनुच्छेद पुन: लेखन गर्दै अन्य स्रोत जोड्दै लेख तटस्थ बनाउनुहोस् ।
लेखको शीर्षक, लेख संरचना, लेखन शैली, भाषा शैली, शब्द प्रयोग र विभिन्न विषयलाई ध्यान दिदैँ लेख लेखिनुपर्छ । यसका लागि लेखको विषयको अध्ययन हुनु आवश्यक छ।
विचारहरू सधैँ विवादित हुन आउँछन् । जस्तै: " विमल राम्रा फुटबल खेलाडि हुन् " भन्ने विचार हुन आउँछ । यसलाई " विमलको खेल फुटबल प्रशिक्षक रोनद्वारा राम्रो मानिएको छ " लेखिए पश्चात् प्रमाणित भएपछि लेख स्तरिय हुन आउँछ ।
सकेसम्म जानकारीहरू अंकमा आए लेख स्तरिय बन्छ । जस्तै: "विमलले सन् २००३ देखि २००६ सम्म सर्वाधिक गोल गरेका थिए", यसो गर्दा विमल राम्रा खेलाडी हुन् या होइनन् भन्ने कुरा बुझिन नआएपनि सर्वाधिक गोलले तटस्थ भएको बुझाउँछ ।
" मानिसहरू विमललाई राम्रो खेलाडी मान्छन् " वा " धेरै मानिसहरू यो सोच्छन् " जस्ता लेखिदाँ लेखमा कतिजना, ककसले जस्ता प्रश्न निम्तिन्छन् । तर, लेखमा त्यसो लेखिदाँ भरपर्दो स्रोत जोड्नु आवश्यक हुन जान्छ ।
दृष्टिकोणात्मक लेखहरू लेखिनु विकिपीडियाको नियम विपरित हो । सबै दृष्टिकोण अटाउने गरि एकै लेख लेखिनुपर्छ । आफ्नै अनुमानको भरमा लेखमा जानकारी थप्नु हुदैँन ।
कुनै पनि दोधारत्मक विषय (विश्वासिलो स्रोतको प्रमाण विना), कुनै पनि एक समूहप्रति आक्षेप वा एक पक्षको तारिफ गरिएका विषय बर्बरता हुन जान्छ ।
कुनै पनि विषयमा प्रबन्धक र अन्य सम्पादकहरूसँग छलफल गरिनु पर्ने हुन्छ । चौतारीमा विकिपीडियाका कुनै पनि विषयका कुरा राख्नुहोस् ।
तटस्थ दृष्टिकोण विकिपीडियाको पुरानो नियम मध्येको एक हो ।
Nupedia को "Non-bias policy" सन् २०००, ल्यारी स्पिर्ङ्गर
विकिपीडियाको पहिलो तटस्थ दृष्टिकोणको नियम १६ फेब्रुअरी २००१.
विभेद सम्बन्धित नियम "rules to consider" Sanger द्वारा अघि सारिएको
जिम्बो वेल्सद्वारा  सन् २००१ अप्रिल
ल्यारी स्याङ्गरद्वारा Meta-Wiki: see "Neutral point of view—draft"२० डिसेम्बर २००१.
धेरै मत पछि (see edit history of Sanger's draft at Meta) ल्यारी स्याङ्गरकै संस्करणलाई मान्यता  केही सम्पादनहरू गरिए(edit history of the NPOV policy), हालको संस्करणसम्म
Brion Vibber मेटामा: see मेटामा, १७ मार्च २००३
सन् २००३ mailing-list post २९ सेप्टेम्बर २००३, जिम्बो वेल्स्
जिम्बो वेल्सद्वारा यस नियमको महत्व दर्शाइदैँ November 2003, April 2006, March 2008 ().
विकिपीडिया मुख्य नीति र दिशानिर्देशहरू
नीति तथा दिशानिर्देशहरू
विकिपीडिया के होइन
विकिपीडिया शब्दकोश होइन
मुख्य सामग्री नीतिहरू
अन्य सामग्री नीतिहरू
अन्य विकिमीडिया परियोजनाहरूबाट सामग्री लिने
कानूनी धम्की नदिने
लेखन शैली/प्रमुख अनुच्छेद
शिघ्र मेट्नुपर्ने आधार
लाइसेन्स र प्रतिलिपि अधिकार
श्रेणी:नीतिहरू / दिशानिर्देशहरू
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिपीडिया:तटस्थ_दृष्टिकोण&oldid=577912" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:१७, ९ नोभेम्बर २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।